I-trailer yokuqala yefilimu noDanila Kozlovsky "Crew" yakhululwa
Ababukeli baqaphele kakhulu ukukhishwa kwemidwebo oyikhonzile. Iningi "lokuphindaphindiwe" lanamuhla labathandekayo kusukela ezindabeni ze-movie ebuntwaneni kwaphela ekuhlulekeni kwangempela. Izindaba zakamuva mayelana nokudubula kwe-"shudevr" elandelayo zaxoxwa ngokukhululekile kwi-intanethi, ngemuva kokuba konke kuhloswe ngefilimu ye-Soviet evelele kakhulu - ifilimu ye-1979 ethi "Crew" ngu-Alexander Mitta, lapho uLeonid Filatov, uGeorge Zhzhenov, u-Ekaterina Vasilyeva, u-Alexandra Yakovleva nabanye abadlali bedlala khona.
Abadali befilimu entsha "AbaCrew", eqinisweni, baqonda ingozi abayithathayo, banquma ukususa incazelo yesimanje ye-Soviet "Crew" edumile.
Mhlawumbe, ukuze angadabukisi izethameli, kunqunywe ukuba bameme abathintekayo abadumile basekhaya - uDanil Kozlovsky noVladimir Mashkov - ezikhundleni eziyinhloko.
Ukuqopha kwefilimu entsha kuphelile izinyanga ezine ezedlule, ngoFebhuwari. Manje abadali bezithombe "badidekile" ngokuhlelwa kwezithombe. Namuhla, ekugcineni, izilaleli zingabona i-trailer yokuqala yesithombe esizayo.
Umlingisi oyinhloko wefilimu ngu-Alexei Gushchin ongumshayeli. Insizwa enethalente ayiqapheli iziphathimandla, iqondiswa ezenzweni zayo ngekhodi yakhe yokuhlonipha. Akumangalisi ukuthi ngezimiso zakhe uGoushchin uphelelwa umsebenzi wakhe oyintandokazi: uxoshwa emotweni yezempi. Iphupho elide elide lika-Alexei - ukulwa kwempi yezempi, lawa. Manje umshayeli wezindiza uhlelwe esiteshini sendiza yabantu.
Ebusweni, i-Guschina ayinalo ubuhlobo neqembu. Konke kuzoshintsha ngemuva kokuba abasebenzi bahlinzekele konke okungu-100% esimweni esibi kakhulu. Le nhlekelele iyohlanganisa ubumbano, ngubani ozokwenza lokhu.
Ngisho noKozlovsky ngeke asindise "AbakwaCrew" abasha kusukela ekuhlulekeni okungenzeka
Kufanelekile ukuphawula ukuthi abasebenzi bezithombe "I-Legend No. 17" basebenze kule ifilimu, ngakho-ke kungenzeka ukuthi ukukhishwa kwe-"Crew" edumile kunamathuba okuphumelela, nokuthola umbukeli walo.
Noma kunjalo, abasebenzisi ababukele i-trailer yamaminithi, sebevele bashiye ukugxeka kwabo. Nazi ezinye zazo, lapho izinkulumo ezingaphenduliwe zingasetshenziswanga (ubuciko nezimpendulo zigcinwa):
Kuze kube manje, akusikho i-remake eyodwa yamafilimu aseSoviet okwedlulele ekuqaleni, futhi lena isesithandweni somlilo! Ukuxhashazwa okungaqondakali kokuklama kweSoviet.
... kungani ungabhayisikobho le ncwadi? Yini le fuck ukudubula into efanayo?
Kungani ungabhayisikobho inhlekelele futhi ungayibi ehlukile ... Yebo, futhi ngokujwayelekile, lokhu kuzobizwa ngendlela ehlukile.
Ukumangaza: Nikita Dzhigurda no-Marina Anisina bafuna intando kaLyudmila Bratash
U-Anna Kournikova no-Enrique Iglesias baqale babonisa izingane zabo: kwacaca ukuthi izingane zifana nani, isithombe
Ubuhlobo obuphezulu: Chaliapin, Kopenkina noKalashnikov babonisa idyll yomndeni
I-cream ukuze uthole amanothi elula kubantu besifazane abakhulelwe
Indlela yokunqoba ukucindezeleka kanye nezindlela eziningana zokuqinisa izinzwa
Roma Beast badumele abalandeli ukwesekwa Cyril Serebrennikov
Ingxenye 2. Ukusetshenziswa kwama-acids ku-cosmetology
Umsebenzi wakho noma intombi?
Izigaba zesifo sokuya esikhathini kwabesifazane
Isimo esincane kunazo zonke ezizimele
Indlela yokufundisa ingane ukwabelana ngayo?
Ama-molecule ubuhle: ukhilimu ebusuku uLancôme Visionnaire Nuit Beauty Sleep Perfector